पाकिस्तानले भारतलाई किन दिएन मिठाइ ? - Everest Dainik - News from Nepal
पाकिस्तानले भारतलाई किन दिएन मिठाइ ?
काठमाडौँ । कश्मीर विवाद चर्किएपछि चुलिएको भारत र पाकिस्तानबिचको तनावका कारण दुई देशबीच वर्षौंदेखि चल्दै आएका परम्पराहरू बाधित भएका छन् ।
बुधबार पाकिस्तानले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ र हरेक वर्ष स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्षमा दुवै देशले पन्जाबस्थित भारतको सीमा अट्टारी-बाघा बोर्डरमा मिठाइ आदान प्रदान गर्ने गर्दछन् । तर यस पटकको स्वतन्त्रता दिवसमा भने पाकिस्तानको तर्फबाट आउने मिठाइको उपहार नआएको भारतीय मिडियाहरूले लेखेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस भारतले नेपाललाई दिँदै आएको अनुदान रकम घटायो
दुवै देशले दीपावली, ईद जस्ता सबै जसो धार्मिक तथा स्वतन्त्रता दिवस आदि राष्ट्रिय चाडहरूमा यस सीमामा मिठाई आदानप्रदान गर्ने गर्छन् । भारतीय मिडियाहरूले यसपालीको बकरइदमा पनि पाकिस्तानको तर्फबाट मिठाइ नआएको बताएका छन् ।
हालसम्म सीमामा प्रत्यक्ष तनाव हुँदा या युद्धको अवस्थामा मात्र यसरी हुने मिठाइ आदान प्रदान बन्द हुने गरेको थियो । भारतले गतवर्ष पाकिस्तानले नियन्त्रण रेखामा युद्धविराम भङ्ग गरेको भन्दै मिठाइ रोकेको थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतसँग सीमा जोडिएको झुलाघाट नाका ४ दिन बन्द
भारतले बिहिबार आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहेको छ तर उसले यस मामिलामा के गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
पाकिस्तानले भारतद्वारा कश्मीरमा चालिएको कदमको विरोधमा भारतसंगका सबै दुइपक्षीय कार्यक्रम रद्द गरिदिएको छ । दुई देशबीच चल्ने रेल सेवा र बस सेवा समेत हाल बन्द रहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस भारतले जित्ला टि–२० मा लगातार चौथोपटक? यस्तो छ दुबै टिमको सम्भावित प्लेइङ ११
ट्याग्स: के गर्दैछन मधेसीनेता तराईमा ? भारतीय नेतालाई र भूमिगत समूहसंग छलफल गर्ने !, पाकिस्तान, भारत, भारत पाकिस्तान तनाव, मिठाई